Results: Kedu ihe kacha mma Linux kesara 2012? | Site na Linux
Results: Kedu ihe kacha mma Linux kesara 2012?
Na 2012, anyị nwere Linux nke ụdị ụtọ na ụtọ niile. Anyị nwere nsụgharị ọhụrụ nke nkesa ndị a na-emebu na ụfọdụ nkesa ọhụrụ pụtara na-ahapụ ihe karịrị otu nnukwu obi ụtọ.
N’isiokwu a, anyị ga-enyocha ihe niile esi na ya pụta votu anyi bidoro n’izu gara aga.
N'ihi Ndị mmadụ 2115 na ha hapuru ha votu!
3 Nhọrọ m
4 Best rookie distro na desktọọpụ desktọọpụ kacha mma: Linux Mint 13
5 Best distro maka ike ọrụ: Arch Linux
6 Onyinye Mkpughe: Manjaro Linux
7 Best distro maka laptọọpụ: Ubuntu 12.04 LTS
8 Nhazi desktọọpụ kacha mma maka azụmahịa: RHELD 6
9 Nkesa kacha mma maka sava ụlọ ọrụ: RHEL & SLES
10 Best LiveCD: KNOPPIX & Puppy Linux
11 Nkesa kacha mma maka nyocha nche: BackTrack Linux 5
12 Kasị mma nkesa maka multimedia edezi: Ubuntu Studio 12.04
13 Nkesa kacha mma nkuzi: Edubuntu 12.04
14 Kacha obere nkesa: DSL 4.4.10 & Slitaz 4
Ubuntu 28.98% (613 votes)
Linux Mint 27.75% (587 votes)
Debian 11.16% (236 votes)
Njiko Linux 10.45% (221 votes)
Ndị ọzọ: 9.17% (194 votes)
Fedora 7.94% (168 votes)
OpenSUSE 3.45% (73 votes)
Mageia 1.09% (23 votes)
Ubuntu na Linux Mint kpochapuru, buru uzo mbu na nke abuo, na agha nke isi na isi. N’etiti ha abụọ were ihe karịrị votu iri ise. N'ebe dị anya nke atọ bụ Debian, nke Arch Linux na-esochi.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ihe nkesa niile ndị Debian gbakwunyere gburugburu 68%. Maka akụkụ ya, nkwụsị doro anya nke nkesa ndị ọzọ na-ewu ewu dịka Fedora ma ọ bụ OpenSUSE ka na-akụ egwu.
Na arịrịọ nke ọha na eze, distros a kpọtụrụ aha na ụdị ọzọ, nke wereghị ma ọ dịkarịa ala votu 194, bụ: Ubuntu dị iche iche (Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu), Manjaro, Crunchbang, Trisquel, SolusOS, Chakra Linux, Bodhi Linux, Gentoo, Sabayon, Elementary OS, na ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, Mageia juru m anya, dịka ọ bụ oke zuru oke ma dị mma "onye mbido" distro. Ma eleghị anya, ọtụtụ ndị ka na-akpakọrịta ya na Mandriva na nsogbu ego ya, ma ọ bụ ma eleghị anya ọ nweghị ahịa dị ukwuu n'azụ ya. Ka osila dị, amaghị m, mana ọ na-atọ ọchị.
Eziokwu bụ na ajụjụ nyocha ahụ dị ntakịrị. Ekwenyere m na ọ dịghị nkesa Linux "kachasị mma". Ekele maka "nnwere onwe" nke ngwanrọ n'efu, ọ ga-ekwe omume ịmepụta mgbanwe ndị dabara adaba na mkpa na ike nke ọ bụla.
N'echiche a, ọ bụrụ na ihe ọ bụla, enwere "ihe kacha mma distros" maka:
novices ma ọ bụ ndị ọrụ dị elu
ihe omume (desktọọpụ, sava, agụmakwụkwọ, multimedia, nche, wdg)
Best rookie distro na desktọọpụ desktọọpụ kacha mma: Linux Mint 13
Dabere na Ubuntu 12.04 LTS (ụdị nke "nkwụsi ike" nke Ubuntu na 2012), Linux Mint 13 na-enye ihe niile onye ọrụ novice nwere ike ịchọrọ:
ezigbo ngwaike nkwado,
nwe koodu vidiyo na ndi okacha mara nke ndabara,
a nnọọ Windows-dị ka ọrụ interface (n'adịghị ka Unity or Gnome Shell based distros), wdg.
ọtụtụ mmemme dị (n'ihi na ọ dabere na Ubuntu na Debian)
Best distro maka ike ọrụ: Arch Linux
N'ezie enwere ndị ọzọ, dịkwa mma nke ukwuu, dị ka Gentoo. Agbanyeghị, Arch Linux na - eto nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ. O nwere obodo nwere ezigbo mmasị na Wiki nke dị ka Aleph: ihe niile dị, lekwasị anya, ọ dịghị ihe gbapụrụ ya.
Arch nwere ihe m bụ njikwa ngwugwu kachasị mma, site na: ọ bụghị ma ọ bụ ihe na-erughị Pacman. Na mgbakwunye na ịnwe ọtụtụ ebe nchekwa gọọmentị, ọ na-enye ohere ntinye nke mmemme ndị ọzọ site na AUR (ihe dịka ebe nchekwa Ubuntu PPA mana Kacha mma). Mepụta ngwungwu maka Arch dị mfe karịa ịmepụta otu maka Debian ma ọ bụ Ubuntu. Maka nke a, enwere ọtụtụ nchịkọta ndị ọzọ dị na AUR karịa na PPAs. N'aka nke ọzọ, ozugbo agbakwunye AUR, nyocha na ntinye nke mmemme bụ ihe ụtọ (n'adịghị ka Ubuntu nke ị na-enweghị ike ịchọ nchekwa data nke PPA dịnụ yana nke maka ntinye PPA chọrọ ọtụtụ iwu).
Ihe a niile na-eme Arch ikuku. Nkà ihe omumu ya gbadoro ukwu na idebe ya mfe, nzuzu (KISS). Eziokwu bụ na ozugbo ị na-ejikwa ụfọdụ echiche bụ isi Arch na-eme ka ọ dịkwuo mfe, nwee ahụ iru ala ma gbanwee karịa Ubuntu na ihe yiri ya.
Onyinye Mkpughe: Manjaro Linux
Dabere na Arch Linux, ọ na-abịa na ihe niile na-eme Arch GREAT distro. Mana o nwere mgbakwunye nke ọtụtụ n'ime anyị nwere ekele nke ukwuu: ntinye ya dị ọtụtụ oge, ebe ọ na-abịa, dị ka ndị ọzọ na distros, na ụdị flavors GNOME, KDE, LXDE, wdg. Na Arch, Otú ọ dị, ị ga-eji aka wụnye ihe niile, nke na-eme ka nrụnye mbụ dị nnọọ mma ego… Jiri nwayọọ.
Na okwu, Manjaro bụ nchikota nke ụwa abụọ kachasị mma.
Best distro maka laptọọpụ: Ubuntu 12.04 LTS
Ubuntu 12.04 nwere ezigbo njikwa arụmọrụ arụmọrụ, na-akwụsi ike, yana nwere eserese eserese nke dabara adaba maka ụdị ngwaọrụ ndị a.
Na mpaghara a, anyị nwere ike itinye Lubuntu yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkesa LXDE ọ bụla. Nke a bụ eziokwu ọkachasị ma ọ bụrụ na ha emeela agadi ma ọ bụ na ha esighi ike “ngwaọrụ” dị mkpa nke chọrọ "mbilite n'ọnwụ"
Nhazi desktọọpụ kacha mma maka azụmahịa: RHELD 6
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, laurel ndị ahụ abanyela na SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED). Agbanyeghị, afọ a, Red Hat Enterprise Linux Desktop 6 (RHELD) mere ihe omume ụlọ akwụkwọ ya.
Gịnị mere e ji gbanwee ya? Ọ na-apụta na Red Hat na-enwe nnukwu ọganihu na ịba uru na teknụzụ ọhụụ metụtara "igwe ojii."
Nkesa kacha mma maka sava ụlọ ọrụ: RHEL & SLES
SUSE Linux Enterprise Server 6 na Red Hat Enterprise Linux 6 bụ ndị mmeri doro anya. Ha abụọ nwere nkwado ngwaike dị egwu nke anyị na-agba nkịtị, nke na-eweta nkwụsi ike dị mkpa nke sistemụ ahụ. Tụkwasị na nke a, na enyemaka abụọ ahụ ọrụ enyemaka mmanụ bụ ụghalaahịa ya.
Okwu ikpe Red Hat na-enwu: n'afọ a, ụlọ ọrụ ahụ gafere akara $ XNUMX ijeri n'ahịa ahịa. Ọ dị ka sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nwere ike ịbụ ọmarịcha ahịa.
Best LiveCD: KNOPPIX & Puppy Linux
Taa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkesa niile ka enwere ike iji dị ka cd dị ndụ. N’echiche, otu a tufuru izi ezi ya. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ nkesa ndị ezubere iji rụọ ọrụ dị ka nke ahụ yana gụnyere ngwa ọrụ izugbe dị iche iche n'ụdị "Switzerland Army mma" yana nke na-enyekwa nnweta data ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, nkwado ndabere, wdg.
Abụọ Knoppix, nke na-eji LXDE, na Puppy Linux, nke na-eji JWM dị oke egwu, gụnyere ngwaọrụ ndị a niile. A na-akwado nkesa abụọ a maka cd nwanyị na nwa nwoke nwoke ahụ pendrive.
Nkesa kacha mma maka nyocha nche: BackTrack Linux 5
Obi abụọ adịghị ya, BackTrack na-aga n'ihu na-enye usoro kachasị mma nke ngwaọrụ mkpuchi okpu ọcha iji nyochaa usoro ọ bụla ma ọ bụ chọpụta nsogbu netwọk.
Ọ na-agụnye ndepụta dị ukwuu nke ngwaọrụ nchekwa, gụnyere ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri na onyo onyo onyonye, ​​na-erigbu faịlụ, ndị na-esi isi, ngwa nyocha ihu igwe, yana ngwaọrụ nyocha ikuku.
Kasị mma nkesa maka multimedia edezi: Ubuntu Studio 12.04
Ubuntu Studio 12.04, dabere na mbipute Ubuntu kwekọrọ, bụ onye mmeri maka ọdịyo, vidiyo na eserese eserese, ebe ọ nwere ngwa ọrụ zuru oke, yana nkwado dị ukwuu maka usoro na kodeks nke ọtụtụ usoro ọtụtụ multimedia.
N'ihe banyere nhazi ederede, Musix kwesiri ka ekwuputa ya puru iche, nkesa nke ndi Argentine, nke juru m anya ya. Ọ na-abịa na kernel dị ala dị larịị iji gbochie "ịwụli" na ndekọ ma na-agụnye ihe niile ederede ọdịyo na edezi kachasị elu. Isi ihe ọzọ dị ịrịba ama bụ na ọ bụ otu n'ime distros ole na ole ndị FSF na-atụle 100% n'efu.
Nkesa kacha mma nkuzi: Edubuntu 12.04
Emepụtara Edubuntu na mmekorita ya na ndị nkuzi na ndị teknụzụ sitere n'ọtụtụ mba. Emebere Edubuntu n’elu Ubuntu ma tinyekwa ihe owuwu ndị ahịa LTSP, yana usoro mmụta a kapịrị ọnụ, na-elekwasị anya ndị bi n’agbata afọ 6 na 18.
N'aka nke ọzọ, ọ masịrị m na ejikọtaghị ya na ọrụ agụmakwụkwọ. Ana m ekwu kpọmkwem maka nkesa nke Steeti ma ọ bụ NGO mepụtara iji mepụta atụmatụ agụmakwụkwọ (Plan Conectar Igualdad ma ọ bụ One Laptop Per Child, dịka ọmụmaatụ).
Nke ikpe azu ma obughi opekata mpe, o bu nkesa izizi nwere obodo kacha nwee.
Kacha obere nkesa: DSL 4.4.10 & Slitaz 4
Damn Small Linux bụ Linux LiveCD na-ekesa na-arụ ọrụ ma zuru ezu, dabere na Knoppix, ezubere iji rụọ ọrụ na kọmputa nwere obere akụ ma ọ bụ ochie, dị ka ndị na-arụ ọrụ Intel 80486. gburugburu ebe obibi. N'ihi ntakịrị obere ya, enwere ike itinye ya n'ime ebe nchekwa USB wee bulie ya na kọmpụta ọ bụla.
SliTaz GNU / Linux bụ ihe ntinye aka na LiveCD nke Linux ụgbọala ozugbo arụnyere. Site na 128 Mb nke RAM o nwere njikwa window JWM (na ụdị isi nri ọ bụ LXDE).
Lee ndepụta zuru ezu nke Linux Obere nkesa Linux.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Results: Kedu ihe kacha mma Linux kesara 2012?
Pacheco siri ike dijo
I kwuwo ya, Debian dị ka mgbọrọgwụ dum, mana maka m n'etiti Arch na Mint, ha bụ ezigbo ekele.
Zaghachi nye Solidrugs Pacheco
dị ka nkesa maka newbies, Linux Mint?, kpochapụwo, ịsị na iji ubuntu na mint bụ maka newbies, enweghị ihe ọ bụla gbasara ya. ị bụ linux fanboys n’ezie
Chukwuemeka odumegwu ojukwu dijo
Ezigbo edemede, na-amasị m ka Mint karịa Ubuntu, ejiriwo m abụọ a tụọ ha mana na njedebe m na-ejikọ mint, ekele.
Zaghachi David Solis Hernandez
Banyere ihe ndị masịrị gị, agba, mgbe m nwesịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile, site na ms-dos 3.1 na windo 8, site na kubutu, ubuntu, fedora, wdg.
Echere m na ọ na-efu efu ịgụnye CrunchBang 11, na agbanyeghị na nkọwa ụfọdụ chọrọ ịchacha, ọ bụ ntụkwasị obi dịka ala ị na-aga ...
Ubuntu n'efu, ibu arọ na ịdị n'otu ọ bụ igbu oge
Onyinye Okonkwo dijo
Ekwubiri m na ugbu a gburugburu ebe m nwere njikwa ike kachasị mma na laptọọpụ m bụ KDE, na kpọmkwem nke nyere m nsonaazụ kacha mma n'akụkụ a bụ OpenSUSE, ọkachasị kemgbe nke ikpeazụ.
Zaghachi Anton Varyheavy
N'oge na-adịbeghị anya, achọpụtara m ihe na-adọrọ mmasị na igwe m (enwere m buut abụọ), ọ bụkwa na Linux Mint 13 KDE distro (na onye ọkwọ ụgbọ ala mara mma, echere m na ọ dị mkpa ịkọwa ya), nke dabere na Ubuntu 12.04, na-erepịakwa. obere batrị karịa Windows 8.
Yabụ m kwenyere na Ubuntu 12.04 bụ distro kacha mma maka laptọọpụ.
Zaghachi Eduardo Campos
uff Ubuntu 12.04 ka mma maka laptọọpụ. Ebee ka m nwere ya arụnyere, Laptọọpụ nke anaghị agbanwu nke ọma
Zaghachi Manuel Pérez
Rodolfo A. González M. dijo
Enwere m nkwụsi ike na Fedora, ọbụlagodi na iji beta 18 ọ dị m mma.
Zaghachi Rodolfo A. González M.
Aga m ede ihe banyere Fedora 18 n'oge na-adịghị anya, nọrọ na-ege ntị. 🙂
Sergio Maximiliano Pavón dijo
na KUBUNTU? 🙁
Zaghachi Sergio Maximiliano Pavón
Ọ gbara ya gburugburu n'ime Ubuntu. Ọ bụrụ na anyị ga-amalite ịtụle "ụtọ" nke distro ọ bụla iche, anyị ga-aga akụ. 🙂
Ubuntu / Mint / Elementary OS / Chakra / Fedora / Mandriva / OpensSuse / Kubuntu / Xubuntu / Sabayon. Ihe ndị ahụ bụ distros nke m jiri, ha pụtara na ndepụta a ma ha nwere ezigbo echiche na m.Eziokwu bụ, ihe kacha mma gbasara ụwa GNU / Linux bụ ọdịiche ya. Ugbu a ọ bụrụ n'ịhọrọ afọ, ekwenyere m na ruo ọtụtụ afọ ugbu a Ubuntu na Mint bụ ndị nyeworo ihe kachasị na ndị wetaara ndị ọrụ kachasị n'akụkụ ndị a ma nwee ebe ha kwesịrị karịa na votu ahụ.
Ọ bụ eziokwu. Arch na-etokwa ntakịrị.
Nke ahụ ziri ezi ... Echere m na ha bụ ọdịnihu.
Ubuntu kacha mma !!!
A nwara m iji Fedora, karịsịa maka nchekwa ya ... mana ebe ọ bụ na Ubuntu bụ onye mbụ na naanị distro na m maara nke ọma, m gara n'ihu na Ubuntu, otu n'ime ụbọchị ndị a m ga-eme nkewa iji nwalee fedora m chọrọ n'ezie.
Zaghachi na pako
Carlos Ferra kwuru dijo
Agbalịrị m ya na dịka eji m mint Linux. Enweghị m ike ịmara ya, alaghachiri m na mint lint. (LMDE).
Zaghachi Carlos Ferra
Etu ị nwere anụ ụlọ (pusi, nkịta, agụ, Sakura ma ọ bụ Tomoyo) na Linux anyị
Valve igbe ọhụrụ Steam Box ga-eji Linux